Dare reSupreme Court Rinotonga Kuti Vaive Mutungamiri weAmerica VaTrump, Vaburitse Magwaro eKubhadhara Kwavo Mitero
Vaive mutungamiri weAmerica, VaDonald Trump
Dare repamusorosoro reSupreme Court remuAmerica neMuvhuro rakatonga kuti vaimbove mutungamiri wenyika yeAmerica, VaDonald Trump, vape magwaro anoratidza mamiriro emari dzavo pamwe nemabhadhariro avaiita mitero kune mumwe muchuchisi ari muNew York sedanho rekuferefetwa kwavari kuitwa.
Sangano renhau reReuters rinoti vatongi vedare repamusorosoro iri vakaramba kutambira chikumbiro chaVaTrump chekuti vasendeke parutivi mutongo wakapiwa nedare repasi musi wa 07 Gumiguru gore rapera waiti kambani inoona nezvemafambisirwo emari dzavo, yeMazars USA, iburitse humbowo hwaidiwa kumatare.
Dare reSupreme Court, iro rine vatongi vapfumbamwe, kusanganisira vatatu vakadomwa naVaTrump pavaive muhofisi, rakambopa mutongo waro kamwechete panyaya iyi muna Chikunguru richiramba humbowo hwaVaTrump hwekuti vakanga vasingakodzeri kuferefetwa nematare sezvo vaive pachigaro.
VaTrump vanonzi vari kushoropodza mutongo weSupreme Court uyu zvakasimba.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vari munyori anoona nezvekufambiswa kwemashoko mubato reMDC-T mudunhu reAmerica, VaAndrew Chaponda, vanoti nyaya yaVaTrump inyaya yanga ichi zivikanwa nevanhu vose kuti inganopinda mumatare edzimhosva chero nguva sezvo vasisiri pachigaro.
VaChaponda, avo vari kuKalamazoo mudunhu reMichigan, vanoti VaTrump vanogona kukwirirwa dare zvakare nemamwe matunhu ayo akanga akangomirira chete kuti vabve pachigaro.
Panyaya yemagwaro avo avanzi nedare vaburitse, VaChaponda vanoti magwaro aVaTrump aya haasi kuzoonekwa nevanhu vose sezvo mutongo uyu wakangonangana nenyaya iri mudare, uye vari kuita nyaya iyi ndivo chete vane kodzero yekuona magwaro aya.
Hurukuro naVaAndrew Chaponda